Diiwaanka faraha ee EU-da - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Diiwaanka faraha ee EU-da
Publicerat tisdag 22 september 2009 kl 10.23
Ururka EU-da ayaa damacsan iney u ogolaadaan heyaddaha ammaanka ee boliiska iyo kuwa sirtuba diiwaanka faraha oo ey ka diiwaan gashan yihiin dadyoowga magangelyodoonka u yimaada waddammada xubnaha ka ah ururka midowga Yurub, si ey ugu sahlanaato iney gacanta ku dhigaan dadyoowga gala falalka dembiyada iyo argagixisnimada ama looga cabsida qabo, si looga hortago.
Laanta heyadda qaramada midoowdey u qaabilsan Qaxootiga ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNHCR, ayaa dhaleeceeyn middaa u soo jeedisey, maadama bey tiri heyaddu qaxootiga oo dhan loo astaamineyo dembiileyaal.
Waa markii ugu horreeysey ee hoggaanka u sareeya ee wakiillada waddammada ku midoobey ururka midowga Yurub uu soo jeediyo in ujeedo kale loo istcmaalo diiwaan markiisi hore loo abuurey hadaf ka duwan iyo sidii looga hortegi lahaa dembiyada.
– Dadyoowga magangelyo doonka ahi maaha dhammaantood dembiileyaal, balse waxaa iminka laga bixin doonaa haddii amuurtani hirgesho sawir ah iney dembiileyaal yihiin dhammaantood, sidaa waxaa yiri Gilles van Moortel afhayeenka laanta qaxootiga ee UNHCR ee heyadda qaramada miodoowdey ee Bryssel.
Diiwaanka faraha ee waddammada ku midoobey ururka midowga Yurub ee lagu magacaabo
Eurodac, ayaa markiisii hore loo abuurey sidii lagu xaqiijin lahaa waddankii ugu horreeyey ee ruuxa magangelyo doonka ahi uu soo caga dhigtey ama uu dalabkiisa ka dhiibtey, sida uu markiisii hore heshiisku ahaa, hase yeeshee iminka la damacsan yahey in wax laga bedelo loona suurtageliyo iney heyadaha ammaankuna ka sahay qaadan qaraan diiwaanka faraha ee soogalootiga.